सांसद–मन्त्री प्रश्नाेत्तर : ५ प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा कहिले ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सांसद–मन्त्री प्रश्नाेत्तर : ५ प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा कहिले ?
काठमाडौँ — सांसदहरुले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पाेखरेललाई सरकारले विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई दिने भनिएकाे शैक्षिक कर्जा सुरु नहुनुकाे कारण साेधेका छन् ।
'आर्थिक रुपमा विपन्न सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध कहिलेसम्म उपलब्ध गराइन्छ?' प्रतिनिधिसभाको साेमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले यो प्रश्न सोधेर चालु महाधिवेशनमा ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ सुरु गरे।
सांसदले मौखिक प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्ने र मन्त्रीले जवाफ दिनेक्रम आजदेखि सुरु भएकाे छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले आर्थिक रुपमा विपन्न सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिए।'विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भएपछि उच्च शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सो प्रावधान ल्याइएको हो। यो कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा शङ्का नगरे हुन्छ,' मन्त्री पाेखरेलले भने।
उक्त प्रश्नमाथि सांसद प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी र राजेन्द्रकुमार केसीले पूरक प्रश्न गरेका थिए।
मन्त्री पोखरेललेसाेमबारकाे बैठकमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५’ प्रस्तुत गरेका छन्। सो विधेयकमाथि सांसद खगराज अधिकारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुसाल, चौधरी र अञ्जना विसंखेले संविधानप्रदत्त अधिकार भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले दायित्व लिनुपर्ने बताए।
विद्यालयलाई बालमैत्री, महिलामैत्री र अपाङ्गता भएका मैत्री बनाउन र शिक्षाको बजेट वृद्धि गर्न माग गर्दै उनीहरुले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसके जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १२:५८
काठमाडौँ — दुई सय वर्षको इतिहास बोकेको ब्राजिलको राष्ट्रिय संग्रहालयमा अगलागी हुँदा दुई करोड वटा वस्तु नष्ट भएका छन् । ब्राजिलको राजधानी रि दि जेनेरियोस्थित संग्रहालयमा आइतबार राति आगलागी भएको हाे ।
आगलागीका कारण मानवीय क्षति नभएपनि ब्राजिलको वैज्ञानिक खोज, इतिहास, संस्कृतिको धेरै ठूलो क्षति भएको संग्राहलयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
'ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो प्राकृतिक विज्ञान संग्राहलय थियो। हामीसँग सय वर्ष पुराना अमूल्य वस्तुहरु थिए ' संग्रहालयका उपनिर्देशक क्रिस्टिना सेरिजियोको भनाई उदृत गर्दै द गर्जियनले लेखेको छ।
अगलागीका कारण ब्राजिलको दुई सय वर्ष पुराना सम्पदा, इतिहास, वैज्ञानिक खोज, संस्कृति र शिक्षाका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु मेटिएको संग्राहलयका उपनिर्देशक लुइज डउर्टेले बताएका छन्।
उक्त संग्राहलय रियो फेडरल विश्विवद्यालयको एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा स्थापित थियो।
संग्राहलयमा १२ हजार वर्ष पुरानो महिलाको अस्थिपञ्जर, डाइनोसारका अवशेष, सन् १७८४ मा अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा खसेको आकाशीय पिण्ड (मिटिअराइट) जस्ता महत्वपूर्ण बस्तु संग्रह गरिएका थिए।
ब्राजिलका राष्ट्रपति मिकेल टिमरले विज्ञान र शिक्षाको क्षेत्रमाअमूल्य क्षति भएको बताएका छन्। उनले ट्विट गर्दै लेखेका छन्,' ब्रजिलको संग्रहालय इतिहासमा आजको दिन दुःखद घटना भएको छ। दुई सय वर्षदेखिको खोज र अनुसन्धान सबै नष्ट भयो। '
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ११:५९